Waa maxay sababta digada digaagga ay tahay in si fiican loo dhalaalo ka hor inta aan la isticmaalin?
Nooca Cusub ee Granulator Bacriminta Dabiiciga ah
Nooca Cusub ee Granulator Bacriminta Noolaha Organic & Compound
Nooca Cusub ee Mashiinka Granulator Bacriminta Nadiifinta & Xarunta
Mashiinka Xashiishka Bacriminta Mashiinka Xuduudaha
20 000 tan Khad soo saarista Bacriminta Dabiiciga ah
Khadka-soo-saarka Bacriminta ee No-qalajinta Qalalan
Khadka Waxsoosaarka Neefta Bacriminta NPK
Ugu horreyntii, digada digaagga ee cayriin uma dhiganta bacriminta dabiiciga ah. Bacriminta dabiiciga ah waxaa loola jeedaa cawska, keegga, digada xoolaha, haraaga likaha iyo alaabada kale ee ceyriinka ah iyadoo loo marayo kala daadsanaanta, halsano iyo warshad sameynta ayaa laga dhigay bacrimin. Digada xoolaha waa mid ka mid ah alaabta ceeriin ee wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah.
Hadday digada digaagga qoyan ama qalalan tahay mid aan khamiir lahayn, waxay si fudud u horseedi doontaa burburinta khudradda aqalka dhirta lagu koriyo, beero iyo dalagyo kale oo lacag caddaan ah, taasoo u horseedi doonta beeraleyda khasaare dhaqaale oo aad u badan. Aynu ku bilowno eegista halista digada digaag ee ceyriin, maxayse dadku ugu maleeyaan digada digaagga ceeriin inay uga waxtar badan tahay tan kale ee xoolaha? Iyo sida loo isticmaalo buuxa ee digada digaagga si sax ah oo wax ku ool ah?
Sideed masiibo oo si fudud u keenay isticmaalka digada digaaga ee guryaha lagu koriyo iyo geedo canab ah:
1. Gub xididdada, gub geedo hana dilo dhirta
Ka dib markaad isticmaasho digada digaagga aan khamiir lahayn, haddii gacantaada la geliyo carrada, heerkulka carradu aad buu u sarrayn doonaa. Xaaladaha halista ah, dhimashada flake ama daaqad buuxda ayaa dib u dhigeysa beerashada waxayna keeneysaa luminta qiimaha shaqada iyo maalgashiga abuurka.
Gaar ahaan, dalabka digada digaaga xilliga jiilaalka iyo gu'ga ayaa leh halista ugu weyn ee nabadgelyada, maxaa yeelay waqtigan, heerkulka gudaha aqalka dhirta lagu koriyo wuu sarreeyaa, iyo khamiirka digada digaagga ayaa diri doonta kuleyl badan, oo horseedaya xidid gubasho . Digada digaaga waxaa loo isticmaali jiray geedka beeraha xilliga jiilaalka iyo gu'ga, waa uun xilligii nasashada xididka. Marka xididku gubto, waxay saameyn ku yeelan doontaa isu-uruurinta nafaqada iyo ubax iyo midhaha sanadka soo socda.
2. Cusbooneysiinta carrada ， waxay yareyneysaa wax soo saarka miraha
Isticmaalka joogtada ah ee digada digaaga wuxuu uga tagay qadar badan oo sodium chloride carrada ah, celcelis ahaan 30-40 kilogram oo cusbo ah halkii mitir oo laba jibbaaran digada digaaga, iyo 10 kiilo garaam oo cusbo ah halkii hektar ayaa si aad ah u xadiday carbinta iyo dhaqdhaqaaqa . Bacriminta fosfateerka adag, bacriminta qallalan, kaalshiyamka, magnesium, zinc, birta, boron, manganese iyo waxyaabo kale oo muhiim ah, taasoo dhalisay koritaanka dhirta oo aan caadi ahayn, burooyin ubax oo aan badnayn iyo wax soo saar miro, oo si weyn u xaddidaya hagaajinta dalagga iyo tayada.
Natiijo ahaan, heerka isticmaalka bacriminta ayaa sanadba sanadka ka dambeeya hoos u dhacay qiimaha waxsoosaarka ayaa kordhay 50-100%
3. Asiidh ciidda oo soo kici cuduro kala duwan oo rhizosphere ah iyo cudurrada fayraska
Sababta oo ah pH digada digaaggu qiyaastii waa 4, waa mid aashito badan waxayna soodheyn doontaa carrada, taasoo keenta argagax kiimiko ah iyo waxyeelo daran oo soo gaadha salka xididka iyo unugyada xididka, iyadoo la siinayo tiro fara badan oo fayrasyo ​​ah oo ay wataan digada digaaga, cudurada ka dhasha carrada. -saaridda bakteeriyada, fayraska waxayna siineysaa fursad gelitaan iyo infekshan, mar haddii qoyaanka iyo heerkulku gaaro cudurka ayaa dhici doona.
Isticmaalka khamiirinta digada digaagga oo aan dhammaystirnayn, fududahay in la sababo dhirta, huruud ah oo qalalan, joojinta joojinta dhirta, ubax la'aan iyo miro, iyo xitaa dhimasho; Cudurka feyraska, cudurada faafa, qudhunka jirida, xididku xidido iyo bakteeriyada ayaa ah tan ugu cad cad ee isticmaalka digada digaaga.
4.Root gunti nematode cayayaanka
Digada digaagga waa xero deegaan iyo taran loogu talagalay nematodes xidid-guntin. Tirada ukunta nematode xididka-xididku waa 100 halkii 1000 garaam. Ukunta digada digaaga waa fududahay in la dillaaco oo lagu dhufto tobanaan kun oo habeen.
Nematodes waxay si aad ah ugu nugul yihiin walxaha kiimikada, waxayna si dhakhso leh ugu gudbaan qoto dheer 50 cm ilaa 1.5 m, taasoo ka dhigaysa mid ay adag tahay in la daweeyo. Root-gunti nematode waa mid ka mid ah khataraha ugu halista badan gaar ahaan da 'da' da 'weyn oo ka weyn 3 sano jir.
5. Soo qaado antibiyootiko, oo waxyeelaysa nabadgelyada wax soo saarka beeraha
Quudinta digaagga waxay ka kooban tahay hoormoonno fara badan, sidoo kale waxay ku darsataa antibiyootiko si looga hortago cudurka, kuwan waxaa lagu qaadi doonaa carrada iyadoo loo marayo digada digaagga, taasoo saameyn ku yeelata badbaadada wax soo saarka beeraha
6. Soo saar gaasas waxyeello leh, oo saameeya koritaanka dalagga, dilo geedo
Digada digaagga ee geedi socodka burburka si loo soo saaro methane, gaaska ammonia iyo gaasaska kale ee waxyeelada leh, sidaa darteed carrada iyo dalagyada waxay soo saaraan waxyeellada aashitada iyo dhaawaca xididka, waxaa ka sii daran soo saarista gaaska ethylene ee ka-hortagga koritaanka xididka, taas oo sidoo kale ah sababta ugu weyn ee xididdada gubanaya.
7. Isticmaalka joogtada ah ee saxarada digaaga, taas oo keeneysa in oksijiin la'aanta nidaamka xididka
Isticmaalka joogtada ah ee digada digaaga wuxuu keenaa oksijiin la'aan nidaamka xididka iyo koritaanka liita. Marka digada digaaga la mariyo carrada, waxay cuntaa oksijiinta carrada ku jirta inta lagu gudajiro nidaamka burburka, taasoo ka dhigaysa carrada si ku meel gaadh ah xaalad hypoxia ah, taas oo joojin doonta koritaanka dalagyada.
8. Biraha culus ayaa ka sarreeya heerka
Digada digaagga waxay ka kooban tahay xaddi badan oo ah macdano culus sida naxaasta, meerkuriga, chromium, cadmium, leedhka iyo arsenic, iyo sidoo kale haraaga hoormoon badan, oo sababa biraha culus ee xad dhaafka ah ee wax soo saarka beeraha, wasakhda biyaha dhulka hoostiisa iyo ciidda, waqti dheer ayey ku qaadataa noolaha arrinta loo beddelo humus, oo waxay keentaa nafaqo-xumo ba'an.
Maxay bacriminta ciidda ugu muuqataa mid si gaar ah sarreysa iyadoo la marsado digada digaagga?
Tani waa sababta oo ah mindhicirada digaagga waa toosan yihiin, saxarada iyo kaadida wada, sidaa darteed maadada dabiiciga ah ee ku jirta digada digaaga, in ka badan 60% maadada dabiiciga ah waxay ku jirtaa qaab uric acid, kala-baxa uric acid wuxuu bixiyaa waxyaabo badan oo ka mid ah nitrogen, 500 kg oo digada digaaga ah waxay u dhigantaa 76.5 kg oo HOL, dusha sare waxay u egtahay in dalagyadu ay si dabiici ah u xoogaysteen. Haddii xaaladdan oo kale ay ku dhacdo nooc jaakad ah ama geed canab ah, waxay soo saari kartaa cudur jireed oo daran.
Tani badanaa waxay sabab u tahay iskahorimaadka u dhexeeya nitrogen iyo walxaha raadraaca iyo xad-dhaafka ah ee kaadi-mareenka, taas oo sababi doonta nuugista walxo kala duwan oo dhexda iyo raadraaca ah in la xannibo, taas oo keenta caleemo jaalle ah, qudhun xundhurta, dildilaaca miraha iyo cudurka cagta cagta digaagga.
Weligaa ma la kulantay xaaladda gubitaanka geedaha ama xididdada qurmay ee geedaha ama geedahaaga khudradda ah?
Bacriminta si aad ah ayaa loo adeegsadaa, laakiin dhalidda iyo tayada lama horumarin karo. Ma jiraan kiisas xun? sida dhimashada kala badh dhererka, carrada oo adkaatay, jajab culus, iwm. Digada digaaggu waxay u baahan tahay inay soo marto halsano iyo daaweyn aan dhib lahayn intaan carrada lagu dabaqin!
Caqli gal iyo adeegsi waxtar leh digada digaagga
Digada digaaggu waa shey ceyriin wanaagsan oo bacrimin dabiici ah, oo ka kooban qiyaastii 1.63% nitrogen saafi ah, qiyaastii 1.54% P2O5 iyo qiyaastii 0.085% potassium. Waxaa looga baaraandegi karaa bacriminta dabiiciga ah qalabka wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah. Kadib geedi socodka halsano, cayayaanka waxyeellada leh iyo iniinaha cawska ayaa lagu tirtiri doonaa kor u kaca iyo hoos u dhaca heerkulka. Khadka wax soo saarka ee digada digaagga asal ahaan waxaa ka mid ah halsano, jajabinta, isku darka maaddooyinka → granulation → qalajinta → qaboojinta → baaritaanka → cabirida iyo xirida → keydinta alaabada dhamaatay.
Shaxda qulqulka habka wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah
Shaxda socodka geeddi socodka bacriminta dabiiciga ah ee soosaarka sanadlaha ah ee 30,000 tan
Dhismaha aasaasiga ah ee khadka wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah
1. Afar taangiyo halsano ayaa laga dhisayaa aagga alaabta ceyriinka ah, mid walboo dhererkiisu yahay 40m, balac 3m ah iyo 1.2m dee-p, wadarkeeduna yahay 700 mitir murabac;
2. Aagga ceyriinka waa inuu diyaariyo 320m tareen fudud;
3. Aagga waxsoosaarka wuxuu gaarayaa bed dhan 1400 mitir murabac ah;
4. 3 shaqaale wax soo saar ayaa looga baahan yahay aagga ceyriinka, iyo 20 shaqaale ayaa looga baahan yahay aagga wax soo saarka;
5. Aagga ceyriinka wuxuu u baahan yahay inuu iibsado gaari saddex-tan ah oo forklift ah.
Qalabka ugu weyn ee line-soo-saarka digada digaagga ：
1. Marxaladda-hore qalabka halsano digada digaagga: mashiinka leexiyaha compost jeexdin, gurguurto mashiinka rogayaasha compost, Mashiinka mashiinka isu roga compost-ka iswada, silsilad saxan mashiinka roga
2. Qalabka burburin: burburiyey wax semi-qoyan, silsilad burburiya, jajab burburiye
3. Qalabka isku dhafan: fiicni jiif ah, fiicni disc
4. Qalabka baaritaanka waxaa ka mid ah mashiinka baaritaanka wareega iyo birqaya mashiinka baaritaanka
5. Qalabka Granulator: khalkhalka granulator, granulator disc, granulator extrusion, granulator durbaanka Rotary iyo mashiin wareegsan
6. Qalabka qalajinta: qalajiyaha durbaanka wareega
7. Qalabka mashiinka qaboojinta: mashiinka qaboojinta wareega
8. Qalabka siyaada ah: quudiyaha tirada, fuuq baxa digada digaaga, mashiinka dahaadhka, uruuraha boodhka, mashiinka baakadaha tiro iswada
9. Qalabka Conveyor: conveyor suunka, wiishka baaldiga.
Naqshadeynta guud ee habka soosaarida bacriminta dabiiciga ah waxaa ka mid ah:
1. Tikniyoolajiyad wax ku ool ah oo ka mid ah noocyada isku dhafan iyo kordhinta dhirta bakteeriyada.
Tikniyoolajiyadda diyaarinta maaddada sare nidaamka halsano halsano.
3. Tikniyoolajiyadda bacriminta gaar ahaaneed ee ugu fiican (isku darka ugu fiican ee caanaha soosaarka waxaa loo qaabeyn karaa si dabacsan iyadoo loo eegayo ciida deegaanka iyo astaamaha dalagyada)
4. Tiknoolajiyadda xakamaynta macquul ah ee wasakheynta labaad (gaaska qashinka iyo urta).
5. Habeynta qaabeynta iyo farsamada wax soo saarka ee khadka wax soo saarka bacriminta.
Arrimaha u baahan fiiro gaar ah ee soo saarista digada digaagga
Fiican alaabta ceeriin:
Dareenka alaabta ceeriin ayaa aad muhiim ugu ah habka wax soo saarka ee bacriminta dabiiciga ah. Sida laga soo xigtay waayo-aragnimada, fiicnaanta dhammaan alaabta ceeriin waa in loo dhigaa sida soo socota: 100-60 dhibcood oo ah alaabta ceeriin ah oo ku saabsan 30-40%, 60 waxay tilmaameysaa qiyaastii 1.00 mm dhexroor alaabta ceeriin ah oo ku saabsan 35%, iyo ku saabsan 25% -30% dhexroor 1.00-2.00 mm. Si kastaba ha noqotee, habka wax soo saarka, saamiga xad-dhaafka ah ee walxaha maqaarka sare waxay u muuqdaan inay sababaan dhibaatooyin sida jajabyo aad u ballaaran iyo walxo aan caadi ahayn sababtoo ah isku-dheellitirnaan aad u wanaagsan.
Heerka Bisayl Gaarsiinta Digada Digaaga
Digada digaaggu waa inay si buuxda u qudhmisaa intaan la codsan. Ku dul-nooleyaasha ku jira digada digaaga iyo ugxantooda, iyo sidoo kale bakteeriyada faafa qaarkood, ayaa la hawl-gelin doonaa iyada oo loo marayo habka kallanaanshaha (halsano). Kadib marka si buuxda u qudhmo, digada digaaggu waxay noqon doontaa bacriminta aasaasiga ah ee tayada sare leh.
Isla mar ahaantaana saddexda xaaladood ee soo socda, waxaad qiyaas ahaan xukumi kartaa digada digaagga ee asal ahaan ka soo baxday.
1. Asal ahaan urin xun; 2. Hyphae cad; 3. Digada digaagga waxay ku jirtaa xaalad dabacsan.
Waqtiga halsano guud ahaan waa qiyaastii 3 bilood xaaladaha dabiiciga ah, taas oo si weyn loo dedejin doono haddii lagu daro wakiilka halsano. Waxay kuxirantahay heerkulka deegaanka, 20-30 maalmood ayaa guud ahaan loobaahanyahay, 7-10 maalmoodna waa lagu dhammeeyaa xaaladaha soosaarka warshadda.
Qiyaasta biyaha waa in la hagaajiyaa ka hor intaan digada digaagga khamiirin. In geeddi-socodka ku-khamiirinta Bacriminta dabiiciga ah, ku-habboonaanta nuxurka biyaha ayaa aad muhiim u ah. Sababtoo ah wakiilka qudhunka ah waxaa ka buuxa bakteeriya nool, haddii aad u qalalan ama aad u qoyan waxay saameyn ku yeelan doontaa khamiirka noolaha, guud ahaan waa in lagu hayaa 60 ~ 65%.
Waqtiga boostada: Juun-18-2021